Posted by ကျော်သုည at 6:42 AM No comments:
လူသားတွေဟာလဲ အတွင်းက လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမီး အငွေ့တွေ့က လောင်ကျွမ်းစရာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အာရုံတွေကို အစစ်အမှန် သုခပဲလို့ အထင်ရောက်ပြီး နေ့စဉ်လိုက်လံရှာဖွေလျက်လောင်ကျွမ်းပစ်ကြပါတယ်။ ရွှေသမင် တံလျပ်ကို ရေထင်သလိုမျိုးပဲပေါ့။ တကယ်တော့ အပြင်မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေဟာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမီးတွေနဲ့ အငွေ့ပျံ အလင်းတိုက်စားလို့ နေစဉ်ရှာဖွေလာသမျှအာရုံတွေဟာ ၀သွားတယ်။ အားရသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုအာရုံမီးစာကို အာရမ္မဏိကကိလေသာလောင်ကျွမ်းလိုက်တာကိုတော့ သတိမမူလျင် မြူ(မီးအငွေ့)ကိုပင် မမြင်စွမ်းနိုင်တာဟာ မောဟရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပါပဲတဲ့။
အော်အ၀ီစိ သောင်းအငူမှာ ခေါင်းမပြူစတမ်း၊
နှစ်အရှည်နစ်မည်လမ်းကိုလ ၊ နင်မျှော်စမ်းနင့်ကို၊
စသည်ဖြင့် နောင်လာနောက်သားတပည့်များအတွက် သတိသံဝေဂ ရရှိရန် ရေးစပ်ကုံးခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
အော်....တကယ်တော့လဲ လောကဓမ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး နှစ်မျိုးစလုံးကို ဆိုလိုတာပါပဲ။ အဲဒီနှစ်မျိုး ကြုံတွေ့လာယင် စိတ်ဓာတ်ယိမ်းယိုင်မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ ပဇ္ဈိမပဋိပါဒါ အစွန်းနှစ်ဖက်ကင်းတဲ့ အလယ်လမ်းစဉ် ဖြစ်တဲ့ ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိဘူး( ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံ ယဿ နကမ္ပတိ ) ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပါယ်တွေပြည့်ဝနေပါလိမ့်မယ်လို့ တွေးတောပြီးတွေးတောနေမိရင်း.........
Posted by ကျော်သုည at 3:46 AM No comments:
ဘာကြောင့် လူတွေ ရွေ စိန် ကို ၀တ်ဆင် ရသလဲ
ကမ္ဘာစဖြစ်တည်ကတည်းက ရုပ်ဝတ်ထုသက်တမ်း အနုအရင့်ကို တွက်ကြည်ယင်တော့ ရတုတွေ လုပ်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ပြန်တွေးကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ငွေရတု၊ ရွှေရတု၊ စိန်ရတု၊ပတ္တမြားရတုတဲ့လေ။
ကမ္ဘာဦးကစတင်ပြီး လူတွေက သက်သမ်း အနုအရင့်ကိုလိုက်ကာ ၀တ်ဆင်လာကြပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ပဌမဆုံး စတင်ဖြစ်တာက မြေကြီးပါပဲ။ မြေကြီးတွေကြာလာတော့ ကျောက်ခဲ့ဖြစ်လာတယ်။ ကျောက်ခဲတွေကြာလာတော့
သံဖြစ်လာတယ်။ သံကြာလာတော့ ကြေးဖြစ်လာတယ်။ ကြေးကြာလာတော့ ငွေဖြစ်တယ်တယ်။ စိန်ဖြစ်လာတယ်။ ကမ္ဘာတည်စကတည်းက မာကြောတဲ့အရာဝတ်ထုဆိုတာ မြေကြီး ပါပဲတဲ့။ အဲဒီမြေကြီးဟာ အဆီးခဲဖြစ်နေသတဲ့။ နောက်ကြာသထက်ကြာလာတော့မှ ...
ပတ္တမြားဖြစ်လာတယ်။ ဒါက သက်တမ်းအနု အရင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဒီဓာတ်ပေါ်မှာ အမှီယူလို့ရအောင် ( ဓာတ်ကူးယူ) ကြတာပါပဲ။ အဲဒါကို အမှတ်မှားကြပြီး ရွှေ ၊ ငွေ တွေ အပေါ်မှာ တပ်မက်စရာလို့ ယူဆလာကြတယ်။
သတ်မှတ်တဲ့ချက်တန်ဖိုးအပေါ်မှာ သမုတိ ချက် လုလာကြတယ်။ ကြွားစရာအဖြစ်ယူဆလာကြတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ ကား၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ ကို အနောက်တိုင်းက တန်ဖိုးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်
ပြီး ဒါသည်ပင်လျင် တကယ်အမှန်ပဲလို့ယူဆလာကြတယ်။ တကယ်တော့ သမုတိအမှန်လောက်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ သမုတိသစ္စာက ၀ိပလ္လာသနဲ့ ချယ်လှယ်လေတော့ စိတ်ထဲက ရောင်ပြန်ဟတ်လာတာပေါ့။
လူတွေက ပိုက်ဆံကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမတိုင်ခင်ကတော့ ကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်လာခဲ့ကြတယ်။ လူတွေကိုတိုင်ထုတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံကပဲ လူတွေ ဒုက္ခပြန်ပေးနေတယ်။ ပိုက်ပိုက်ရှာလိုက်တာ လင့်ဟာသွားတဲ့ တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတောင် လူတွေမှာ မရလာရှာကြတော့ပါဘူး။ ( ဆက်ပါအုံးမယ်)
Posted by ကျော်သုည at 11:32 PM No comments:
သတိမမူ ဂူမမြင်၊ သတိမူလျင် မြူကိုပင် မြင်နိုင်ပါသည်
( အုတ်တချပ် သဲတပွင့်)
ကမ္ဘာကြီးက အနုမြူကနေ စတင်ပြီး အနုမြူမှာတင်ပြန်ဆုံးပါတယ်။ အုတ်တချပ် သဲတစ်ပွင့်ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ရှင်းလင်းကြပါစို့၊ မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာမြင်နေကြရတဲ့
မိုးတိမ်မကမြင့်မားလှတဲ့ အဆောက်အဦးတွေက ဘယ်ကနေစတာလဲပေါ့။ အုတ်ချပ်တစ်ခုချင်းစီတွေကို စီကာစဉ်ကာ ထပ်ပြီး ပေါင်းထားလို့ ဒီလိုအဆောက်အအုံတွေဖြစ်လာတာပေါ့။ အုတ်ချပ်ကလဲ သဲတွေကို ပေါင်းစဉ်းထားလို့ အုပ်ချပ်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ အငယ်ဆုံးသဲတစ်ပွင့်ချင်းကနေ အုတ်တစ်ချပ်ဖြစ်လာတယ်။ အုတ်တစ်ချပ်ကနေ ပေါင်းလိုက်တော့ ကြီးမာတဲ့ အဆောက်အအုံတွေဖြစ်လာတယ်။ ကြီးမားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေပျက်စီးသွားပြန်တော့ ဆိုင်ကယ်လင်း စစ်တမ်( cycling system) အရ မြေမှုန့်သဲမှုန့်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ လူသားတွေရဲ ခန်ဓာကိုယ်ဟာလဲ အငွေ့လိုမျိုး (ရုပ်ဓာတ်ငွေ့) အမှုန်တွေကနေ စတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီငွေတွေကလဲ နာရီး မီနစ်စက္ကန့် မလပ် ငွေ့ငွေ့နဲ့ အလင်းတိုင်းစားပြီး ပျက်စီးနေတာပါပဲ။ အဲဒါကိုပဲ အနိစ္စလို့ ပြောတယ်ထင်ပါတယ်။ အငွေ့တွေထွက်တာထင်ရှားတာကတော့ ပထမလူတစ်ယောက်ရေချိုးပီးထွက်လာတဲ့ရေချိုးခန်းကို နောက်လူ ( သင်ဖြစ်နေခဲ့ယင်)သင်ဝင်သွားခဲ့ယင် ရေချိုးခန်းကပူနေတာကို သင်ခံစားမိမှာပါ။ အဲဒါဟာ (အရင်လူက) သူ့ခန်ဓာထဲက ရုပ်ဓာတ်အမှုန်အမွားတွေလွင့်စင်ပီး ( အလင်းပျံကာ ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပဲပေါ့ဗျာ။ )ဒါကြောင့် လူတွေက အိုမင်းလာတဲ့ သဘော(သန္တတိဇာတိ ဇရာ မရဏ)ဖြစ်လာရပါတယ်။ ရက် ၊ လ ၊ နှစ်တွေ ကြာလာတော့ ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရယင် ရုပ်ဓာတ်တွေကုန်ဆုံးနေတယ်လို့ ပြောတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ လိုပဲ နာမ်ဓာတ်ဟာလဲ ပြောင်းလဲ ကြွေလွင့်နေတာပါပဲပေါ့။
အနှစ်ချုပ်ကြည့်တော့ လူဆိုတာ ရုပ်ဓာတ် နဲ့ နာမ်ဓာတ်နှစ်ခုကို ပေါင်းထားတဲ့ သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ပါပဲလားဗျာ။
Posted by ကျော်သုည at 12:28 AM No comments:
MANORANGONBARUA. PASSPORT NO.B.1677789
FATHER NAME; MIMANDARA BARUA, BIRTH OF DATE 05.08.1982
PASSPORT EXPIRES 25-04-2013
RESIDENCE.WATNANTIKARAM. 3/2 LAONADEE ROAD,MAUNG DISRIC, KHONKEAN PROVINCE,40000.THAILAND
STUDENT CODE 520518025 -
1.MATHER NAME. PATALI BALA
Posted by ကျော်သုည at 4:49 AM No comments:
( ပြည်တွင်းက) ညီတော်များကို ကနဦး တိုက်တွန်းချင်တဲ့ အာသီသကတော့ ဓမ္မသဟာနဲ့ အင်တာနက် ဂေဟာ တို့ ဘယ်လို ဆက်နွှယ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ ဓမ္မသဟာဆိုတာ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပေါ့။ ကိုယ့်ကို တိကျတဲ့ လမ်းညွန်ချက်များ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ပြည်ပမှာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း သတင်းသုံးဖော်ကောင်းလိုပါတယ်။ အင်တာနက် ကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်ဖို့ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို ပဌမ လေ့လာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပတက္ကသိုလ် တစ်ခုခုကို တက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပြီဆိုယင်တော့ ပြည်တွင်းမှာ မိမိနိုင်တဲ့ အားနဲ့ ဆရာခေါ်ပြီးပဲ ဖြစ်စေ၊ သင်တန်းတွေကို လိုက်တက်တာပဲ ဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းမွန်အောင် ကြိုတင်ကာ မွမ်းမန်ထားသင့်ပါပြီ။ ဒါမှသာ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကနေ စတင်ထွက်ခွာလာတာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ်သုံးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မှာတော့ တောင်ဥက္ကလာပက ဦးအဂ္ဂကျောင်း၊ မြောက် ဥက္ကလာပတွင် ဇမ္ဗူအေးတိုက်က မြတ်မင်္ဂလာကျောင်း၊ မယ်လမုဘုရာအနီး၊ ဘုန်းကြီးလမ်းက ဦပညာဒီပကျောင်းများနှင့် လှည်းတန်းတွင်း ဦးဝင်းနိူင်သင်တန်းများမှာ ဖီးလ်ကြေး သက်သက်သာသာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေ လိုက်တက်သင့်ပါတယ်။ လစဉ်ထွက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစောင်များကိုလဲ ဗဟုသုတ တိုးပွားအောင် ၀ယ်ဖတ်ခြင်း၊ ငှားဖတ်ခြင်းလုပ်ပေးရပါမည်။ သို့မှသာ တစ်စထက် တစ်စ အင်္ဂလိပ်စာတော်တဲ့ လူတော်လူမွန်များဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တွင် ယခုအခါ မြို့နယ်တိုင်းလိုလိုတွင် အင်တာနက် ဆိုင်များ မှိုလိုပေါက်နေပါပြီ၊ ဒါကို အခွင့်အရေးယူကာ နိုင်ငံတကာသို့ ဆက်သွယ်သော လမ်းကြောင်းအဖြစ် မိမိရရ အသုံးချရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူလေ့လာခြင်းသည် အင်တာနက်သုံးသသည့်အခါတွင် မေ့နေတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေပါသည်။ စကားလုံးမှတ်မိ အားလည်း တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင် အနည်းဆုံး ပထမကြီးအောင်ထားယင် အင်္ဂလိပ်စာကို စတင်လေ့လာလို့လိုရပေသည်။ ယနေ့ခေတ်လိုအပ်အပ်ချက်အရ အင်္ဂလိပ်စာကို တတ်အောင်ကို သင်ယူထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမကြီး အောင်ထားပြီးသူများသည် အောင်လက်မှတ်ကို နိုထရီပြန်ထားရမည်။ အမှတ်စာရင်းတောင်းယူလာရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ပြည်ပတွင် ဘီအေ တန်းကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်မည်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရ သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယအတွက် အောင်လက်မှတ်ကို နိုထရီပြန်လာရမည်။ အမှတ်စာရင်းတောင်းခံလာရမည်။ သာသနတက္ကသီလ ဓမ္မာစရိယအောင်ထားပြီးသူများမှာတော့ အမှတ်စာရင်းသာ တောင်းလာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပတွင် အမ်အေတန်းကို ဆက်လက်လျှောက်ထားသင်ယူကြမည်ဖြစ်ပေသည်။ ပြည်ပတွင် ကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးသော မိတ်ဆွေများထံသုိ့ချည်းကပ်၍ ပြင်ဆင်သင့်တာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြပေသည်။ အင်တာနက်ဆိုင်သို့ ပြေးကား ပြည်ပလာခင် ပြင်စရာများကို စုဆောင်းလာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချက်တင်ဝင်၍ အဖိုးတန်ချိန်များကို မဖြုန်းတီးသင့်ပါ။
၁။ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်ရပေမည်။
၂။ ကွန်ပြူတာအခြေခံ အဆင့်ရှိနေရပါမည်။
၃။ ပြည်ပတွင် အဓိကသင်လိုသည့်ဘာသာရပ်တွင် ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ကျော်သုည at 8:42 AM No comments:
Posted by ကျော်သုည at 7:53 AM No comments:
တပည့်တော်များ မြန်မာရဟန်းတော်များသည် ယနေ့ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာသို့ တစ်စတစ်စထိုးဖောက်ဝင် ရောက်နေရာယူလာကြပါသည်။ မီဒီယာ ခေတ်တွင် မီဒီယာကို ကောင်းကောင်းအသုံးချ၍ ဗုဒ်ဓတရားတော်များကို နေရာ ဒေသမရွေးနေထိုင်ကြသည့် သတ္တ၀ါအများကို မီဒီယာအားဖြင့် အသိပေးနိုင်သောအခွင်များလည်း လက်တွင်းသို့ ဆိုက်ရောက်လာပါပီ။ ရှေးရှေးက ပြည်ပရောက် ပြည်ပရောက်သံဃာတော်အဖွဲ့များသည် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့၍ ညီညွတ်အောင် ကြိုးစားသော အလေ့အထများလည်း အားနည်းခဲ့ကြသည်ဟုယူဆမိပါသည်။ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်သောစနစ်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းသည် တိုးတက်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ စတင်ရောက်ရှိစေသောနည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အတွင်း အရည်အသွေးကောင်း ဗျတ္တိပဋိဗလ ရှိသောသူများကိုလည်း မဲ့ဆန္ဒရှင်များက မျက်စိကျနေမှာဖြစ်ပါသည်။ သံဃာ့အကျိုးကိုသယ်ပိုးခြင်းးသည် ကျန်သော ဘုရား တရား အကျိုးတို့ကို သယ်ပိုးသည်နှင့်ထပ်တူကြပေသည်။
စွမ်းစွမ်းတမံ သံဃာ့အကျိုးကိုသယ်ပိုးသူများသည် မှန်ကန်သော သာသနာပြုအာဇာနည်များဟုလည်း ခေါ်ထိုက်ပါပေသည်။ ဘုရား၏လမ်းစဉ်ကား အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဘုရား၏ သမုတိသံဃာ၊အရိယာသံဃာ သားရဟန်းတော်များသည်လည်း ဘုရားလမ်းစဉ်ကို လျှေက်လှမ်းကြမည့် အာဇာနည် သာကောင်းများပါပေတည်း၊ စာပေးဆည်းပူးခြင်းဖြင့် တဖက်တစ်လမ်းတွင် သံဃာ့အရေး လက်မနှေး ဆောက်ရွက် ကြရသည်။ ဆောင်ရွက်သူများကိုလည်း ဘုရားချမှတ်ထားသောလမ်းကို အမှန်တကယ် လျှောက်လှမ်းသူဖြစ်ပါမူကား မုဒိတာပွား သာဓု ခေါ်ဆိုထိုက်ပါပေတည်း။ နောက်နောင်လည်း ဤပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို သံဃာ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မတုံ့မဆိုင်း မဲ့ပေးထိုက်ပါပေ၏၊ ဤသည်ကား သာသာနာ့အာဇာနည်ကို အမှန်တကယ် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုခြင်း( ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ ) မင်္ဂလာကို ကျင့်သုံးခြင်း မည်ပါပေး၏။
ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ ဟုဆိုရာဝယ် ပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်၊ ဓမ္မပူဇာ- စာပေအသိဥာဏ်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း၊ အာမိသပူဇာ-ပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့် ပူဇော်ခြင်းတည်း။ ထိုနှစ်မျိုးတွင် ပထမပူဇော်နည်းကာ အလွန်မွန်မြတ်ပါပေ၏။ ဘုရားရှင်သည် မယ်တော်မိနတ်သားအား နက်နက်ခက်ခဲသော အဘိဓမ္မာတရား ဟောကြားခြင်းတည်းဟူသော ဓမ္မပူဇာဖြင့် မိခင်အား ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤနည်းတူ ဇနီးသယ်နှင့် သားတော်ရာဟုလာလေးတိုးအား လည်း တရားအမွေ ချီးမြှင့်ခြင်း ဓမ္မပူဇာဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည် မဟုတ်တုံလော။ အာမိသပူဇာသည်လည်း ပူဇော်ထိုက်သောအရာတို့တွင် ဒုတိယနေရာတွင် ပါဝင်ပေသည်။ အဂတိတရားကင်းစင်သော၊နာယကဂုဏ်ကို ဆောင်နုိုင်သော၊အတ္တသမ္မာပဏိဓိ မိမိစိတ်ကို ကောင်းဆိုးလောကဓမ်ရှစ်ပါးနှင့် ကြုံတွေ့လာလျှင် အလယ်အလတ် သဘောထားနိုင်ခြင်း၊ ကာယအား၊ဥာဏအား မျှတခြင်း စသော ဂုဏ်ထူးဝိသေသများဖြင့်ပြည့်စုံ
သော သာသနာ့အာဇာနည်လောင်းများကို ဘုရားတပည့်တော်များ သံဃာ့အလယ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနုိုင်မှာ ဖြစ်
ကြောင်း ယုံကြည်စွာဖြင့် ပန်းပင်ပျိုလေး ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်သောတုဇနအသင်းကို ဤတွေးတောမိတာလေး
ဖြင့် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည် အရှင်ဘုရားတို့။
Posted by ကျော်သုည at 6:55 AM No comments:
Posted by ကျော်သုည at 6:52 AM No comments:
Posted by ကျော်သုည at 7:51 PM No comments:
Posted by ကျော်သုည at 7:01 AM No comments:
ကိုယ့်ရင်ထဲကိုယ် အရင် ငုံ့ကြည့်လိုက်စမ်းပါ
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေ အဝေမတည့်ကြဘူး၊ ပိုက်ဆံလေး၊အာဏာလေး၊နေရာကို နှစ်ကြာတယ်၊လုပ်သက်ရင့်လို့၊ငါကဘာကောင်
လို့ ယူဆကာ သွေးစည်းမဲ့အစား ဘာမဟုတ်တဲ့နေရာလေးမှာကိုပင် ဒီမိုကရေစီစနစ်မကျင့်သုံးကြဘူးဆိုတာသိ
ရတယ်။ ဒီလိုဆိုဘယ်လို ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတစ်ယောက်က ဒီမိုကရေစီကိုတိုက်နိုင်မှာလဲ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်
တောင်မှ ဒီမိုကရေစီကိုနားမလည်သေးပဲကိုး။ ပြည်ပရောက်လာတော့ တောသားမြို့ရောက်ဆိုသလိုမျိုး မမြင်ဘူးတဲ့ ရွှေပလင်ကို မြင်ရတော့ အာသာရမက် ငန်းငန်းတက်လာတယ်။ ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်လားတယ်။
နေရာကို အာဏာရှင်လမ်းစဉ်အတိုင်းစွဲကိုင်လာချင်တယ်၊ အဲဒါက ဒီမိုကရေစီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေလားတဲ့၊
ကိုယ့်နဲ့လက်တွဲဖော်လုပ်ကိုင်ဖက်တွေကို လဲနေရာပေးရတယ်၊ သူတို့အရည်အချင်းကို အသိအမှန်ပြုတတ်ရတယ်၊
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှ တော်ကောင်းတတ်တဲ့သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို အသိအမှန်မပြုတတ်ဘူးဆိုယင် ကိုယ်ရှာဖွေနေတဲ့ ဒီမိုကရစီဆိုတာ အလှမ်းဝေနေအုံးမယ်ဆိုတာ သေချာတွေးကြည့်စမ်းပါကိုယ့်လူရာ။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့လိုက်တိုင်း ကိုယ်ကကုလားထိုင်ကနေချင်ဘူဆိုယင်တော့ တစ်နှစ်တစ်ခါ အဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့စည်းတိုင်း ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုမဲပေးတဲ့ စနစ်ကျင့်သုံးကျယင်မကောင်းပေဘူးလား၊အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို ကျန်တဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကု မဲစနစ်နဲ့ရွေးမယ်၊ ဒါဆိုယင် ကိုအဖွဲကနေပီး ဒီမိုကရေစီကို စတင်ကျင့်သုံးနေပီဆိုတဲ့ သဘောမျုိးဆောင်းနေပီလေ။
ဘာမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖွဲ့တာတောင်မှ အာဏာကို စွဲကိုင်ထားခြင်တယ်ဆိုယင် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အောင်လို့ တစ်ဒေါက်တစ်နေရာကနေ များနေရာရယင် ဆင်းပေးချင်ပါ့အုံးမလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာတွေပါလာပီ။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းညီညွတ်ရေးပဲ၊ ညီညွတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်၊ ဘုရားက ၀ဇ်ဇီတိုင်းသားတွေကိုဟောကြားထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလဲကျင့်သုံးတတ်ရတယ်။
Posted by ကျော်သုည at 8:22 AM No comments:
ထိုင်းနိုင်ရောက် မြန်မာများလူနေထိုင်မှု နှင့်အလုပ်အကိုင်များ
Posted by ကျော်သုည at 7:17 AM No comments:
ဒီနေ့ ဘလော့လေးတစ်ခုရေးချင်တဲ့စိတ်ရှိလာတာနဲ့ ဒီဘလော့လေးကို ဖန်တီလာမိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်ကလဲ ဘလော့ကိုရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ပျင်းနေတာနဲ့ပဲ ဆက်မရေးဖြစ်ခဲ့တော့ဘူး။
ကိုယ်ပိုင်ဘလောဂ်လုပ်ချင်တာကလဲ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေကို ခဏတာသိမ်ထားချင်တာလဲ ပါပါတယ်။
၂၀၀၉ ၀င်လာတာ ခြောက်လတောင်ရှိရောပေါ့။ နောက်ခြောက်လဆိုယင် ၂၀၀၉ ကလဲကုန်ပီလေ။ စက်ကန့်ကို
မီနစ်စား၊ မီနစ်ကို နာရီစား၊ နာရီကို ရက်စား၊ ရက်ကို လစား၊ လကိုကို နှစ်စား၊ နှစ်က လူကိုစား ဒါနဲ့ပဲ ဒီဘ၀တစ်ခု
မီးစာငြိမ်းသွားတာပေါ့လေ။ ရွှေသမင် တံလျပ်ကို ရေထင်နေသမျှ ဘ၀ဟာလဲ ဘယ်အခါမှ ပြည့်စုံတယ်လို့ ပြောလို့
Posted by ကျော်သုည at 1:34 AM No comments:
MANORANGONBARUA. PASSPORT NO.B.1677789 FATHER NAME...
ထိုင်းနိုင်ရောက် မြန်မာများလူနေထိုင်မှု နှင့်အလုပ...